Xilidhibaan C/qadir Xaashi : – Shirka Golaha Wasiirada ee Kismaayo waa Caadifad aan waxba soo kordhineyn | puntlandi.com
Thursday, July 13th, 2017 | Posted by Al
Xilidhibaan C/qadir Xaashi : – Shirka Golaha Wasiirada ee Kismaayo waa Caadifad aan waxba soo kordhineyn
Xildhibaan C/qadir Xaashi
Waxaa maanta magaala xeebeedka Kismaayo oo caasimadda ku-meel-gaarkaa u ah Dawlad-Goboleedka Jubbaland lagu ku qabsoomay shirkii caadiga ee Golaha Wasiirada Dalka. Arrintaan, waxaa loola jeedi karaa siyaaba badan oo ay ka mid yihiin sida RW Khayre sheegay u kuur gelidda duruufaha ka jira maamulada dalka.
Waxaa is weydiin mudan su’aalaha soo soda:
1- Amni iyo dhaqaale ahaan ba tee fudud in RW ama Ku-xigeenka RW, ama Wasiir ama dhawr wasiir tagaan Magaala madaxyada dawladaha ka trisan DFS iyo la raro Golaha wasiirada oo hadda than 69 xubnood oo ay weheliyaan ugu yaraan 30meeyo hawl wadeeno ka ah Xafiisyda dawladda?
2- Allah naguma keenee haddii shil yimaado, yaa dalka maamulaya? Waxaan si weyn ula yaabay in RWhii iyo RW xigeenkii is raaceen.
3- Dhaqaalaha faraha badan oo hadba loogu rarayo Golaha Wasiirada xarumaha Dawlad-Goboleedyada halkee ka imanayaa? Ma lagu qasban yahay gaarahaan markaan ognahay in Madaxweynayaashii Dawladaha ka tirsan DFS ay hadda Muqdishu ku dhamaysteen shirkii u dambeeyey, duruufaha amniga, dhaqaalaha, iyo arrimaha bulshada oo ka jira deegaanada ay ka taliyaana ay iyagu hadda u yimaadeen caasimadda inay kala xaajoodaan madaxda dalka oo Madaxweynaha, RW, RWKX, iyo Golaha Wasiiradu ugu horreeyaan?
4- Midda u dambaysa, ma laga fakarey in ay dhici karto in rajada ka abuuranta siyaarooyinkaan (high expectations) in la dabooli waayo oo ay ka daroo dibi dhal noqoto?
Qoraalkaan ma aha mid aan mu mucaaradayo fakarka iyo xukuumadda toona. Waa keliya oo bayaanin waxa ka dhalan kara in lagu dhaqaaqo falal caadifadeed aan wax soo kordhineyn, laga maarmo, aan hadhowna la fulin karin rajada ay ku abuuraan dadka baahan oo samirka weheshan jirey.
Waxaan arkay in wafdigu Kismayo Ku tageen diyaaradda AfricaExpress oo ah diyaarad gaar loo leeyahay kharajna ku baxayo. Dhaqaalahaas budget ka ama miisaaniyadda halkee uga jiraa? Anigu afar sano iyo afar bilood ayaan ka mid ahaa Guddiga Golaha Shacabka u qaabilsan samaynta iyo daba-galka miisaaniyadda mana ku ogi (Line item) ama qoondeyn ku aaddan safarka Golaha Wasiirada.
Waxaa xusid mudan in ay dhawaan xukuumaddu ummadda soomaaliyeed u soo bandhigtay mashruucii yaabka lahaa ee ahaa in qaaraan lagu dhiso ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed. Haddaba, miyaanay haboonayn in ay iyadu guntiga dhiisha ka dhigato oo iska bilawdo maamul wanaagga iyo xakamaynta kharajka? Aragti ahaan, ciidanka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay miisaaniyad xooggan oo la isku hallayn karo, dawladnimaduna waa in si cilmi ah taas lagu keeno. Waa bahdila in loo qaaraanto Xoogga Dalka.
Xukuumadda RW Khayre waa cusub tahay mana mudna in hadda wax mucaarad u eg ama loo qaadan karo loo muujiyo hayeeshee waxaa ah mas’uuliyad xumo in wiixii sixitaan ah lagala bakhaylo, ama gabbado hadba sida duruuftu tahay ayadoo la eegayo. Dalka waxaan ugu hiillinaynaa sixitaanka wixii qaldan.